वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विरुद्ध बागी उम्मेदवारको चुनौती
राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक ७ मंगलबार | ०४:२८
काठमाडौ ७ कार्तिक । प्रमुख राजनीतिक दललाई आगामी मंसिर १० मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारीले सताउन थालेको छ। यसैबीच दलहरूले बागी उम्मेद्वार दिएकालाई कारबाहीको तयारी थालेका छन्। प्रमुख दलले आन्तरिक रूपमा बागी उम्मेदवारलाई सम्झाउने तथा फकाएर उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रयत्न पनि असफल भए कारबाही गर्नेगरी मातहतका कमिटीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।
धेरै जिल्लामा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारविरूद्ध बागी उम्मेद्वार विषयमा आजको नयाँ पत्रिकाले यसरी खबर छापेको छ।
रामेछाप : वाम गठबन्धनविरुद्ध माओवादीकै बागी उम्मेदवार
वाम गठबन्धनलाई सबैभन्दा ठूलो झड्का रामेछापमा लागेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका दुईवटै क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बागी उम्मेदवार खडा भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा माओवादीका श्यामकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको विरुद्धमा माओवादीकै पूर्वसभासद् लक्ष्मी गुरुङले उम्मेदवारी दिएकी छिन्। त्यस्तै, प्रदेश सभाका दुईवटा क्षेत्र एमालेको भागमा परेको छ। क्षेत्र नं. १ बाट जिल्ला अध्यक्ष शान्तिप्रसाद पौडेल र २ बाट कैलाश ढुंगेल उम्मेदवार बनेका छन्।
उनीहरूको विरुद्ध पनि माओवादी नेताहरू बागी उम्मेदवार बनेका छन्। क्षेत्र नं. १ मा हेमन्त पौडेल र क्षेत्र नं. २ मा मयनकुमार मोक्तानले उम्मेदवारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रकै नेता युवराज चौलागाईं, पेमा लामा, रामकुमार लामा, यशु चौलागाईं, नेत्र लामा, खड्ग घिसिङ, रेम थापा, धनदेवी श्रेष्ठलगायतको पनि समर्थन छ।
मनाङ : पहिले भर गरिएका मनाङेबाट नै एमालेलाई डर
प्रदेश सभा क्षेत्र नं. २ का लागि एमाले मनाङले दीपक मनाङेको नाम सिफारिस गरेको थियो। नेतृत्वबाट पनि मनाङेले टिकटको आश्वासन पाएका थिए। तर, अन्तिम समयमा एमालेले खाण्ड लामा गुरुङलाई उम्मेदवार बनायो। त्यसका विरुद्ध मनाङेले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। पाँच हजार आठ सय ८० मतदाता रहेको मनाङमा मनाङेले थोरै प्रभाव पार्दा पनि नतिजा तलमाथि हुने डर एमालेलाई छ।
ओखलढुंगा : आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार
प्रदेश सभाको क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेसले जिल्ला सभापति प्रदीपकुमार सुनुवारलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तर, टिकट वितरण गर्दा नेतृत्वले गलत निर्णय गरेको भन्दै तरुण दलका जिल्ला सभापति ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सुनुवारलाई टिकट दिएको विरोधमा महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिसहितका जिल्लाका ३१ नेता÷कार्यकर्ताले विज्ञप्ति निकालेका छन्।
दोलखा : पशुपति चौलागाईंविरुद्ध पुराना एमाले नेता लालकुमार विद्रोही
प्रदेश सभाको क्षेत्र नं. २ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले नेता पशुपति चौलागाईं उम्मेदवार छन्। उनका विरुद्ध एमालेकै पुराना नेता लालकुमार केसीले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेले टिकट नदिएपछि केसी मालेबाट उम्मेदवार बनेका हुन्। उनी ०५४ मा जिल्ला विकास समितिको सभापति थिए।
पूर्वरुकुम : माओवादीकै केन्द्रीय नेता विद्रोही उम्मेदवार
वाम गठबन्धनका तर्फबाट पूर्वीरुकुममा प्रतिनिधिसभाका लागि माओवादी केन्द्रकी कमला रोक्का र प्रदेश सभाको क्षेत्र नं. १ बाट माओवादीकै तेजबहादुर ओली उम्मेदवार बनेका छन्। उनीहरू दुवैविरुद्ध माओवादीकै नेताहरू विद्रोही उम्मेदवार बनेका छन्। रोक्काको क्षेत्रमा माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तेजेन्द्र खाममगर र ओलीको क्षेत्रमा पुणीराज घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेतृत्वले पिछडिएको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर टिकट वितरण गरेको भन्दै स्थानीय केही माओवादी नेताहरूले पनि विद्रोही उम्मेदवारलाई नै साथ दिएका छन्।
नुवाकोट : जगदीश्वरनरसिंहविरुद्ध कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार
कांग्रेसले नुवाकोटको प्रदेश सभा क्षेत्र नं. १ मा जगदीश्वरनरसिंह केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनका विरुद्ध कांग्रेसकै बद्री त्रिपाठीले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेस कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय रहेका उनी साबिकको मदानपुर गाउँ कमिटीका पूर्वसभापति हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा त्रिपाठी बेल्कोटगढी नगरपालिकाको मेयरका दाबेदार थिए।
लमजुङ : दिलबहादुर घर्तीविरुद्ध द्वारिकाप्रसाद मिश्रको उम्मेदवारी
प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीविरुद्ध पनि बागी उम्मेदवारी परेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत बागी उम्मेदवार बनेका द्वारिकाप्रसाद मिश्रले घर्तीविरुद्ध पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ।
जाजरकोट र मुगु : दुई जिल्लाका ६ वटै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका बागी
वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतविरुद्ध एमालेका गोविन्दविक्रम शाहले उम्मेदवारी दिएका छन्। शाहको बागी उम्मेदवारी परेपछि एमालेको भागमा परेको प्रदेश सभामा माओवादीले र माओवादीको भाग परेको क्षेत्रमा एमालेले पनि उम्मेदवारी दिएको छ। त्यस्तै, मुगुमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका सबै सिट एमालेलाई दिएको भन्दै तीनै क्षेत्रमा माओवादीले उम्मेदवारी दिएको छ।
संखुवासभा : वाम र लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धनका बागी उम्मेदवार
वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेका राजेन्द्र गौतम र कांग्रेसका तर्फबाट दीपक खड्का उम्मेदवार छन्। उनीहरू दुवैविरुद्ध स्थानीय कांग्रेस नेता बालकुमार राई र एमालेका डा. गुप्तबहादुर श्रेष्ठ बागी उम्मेदवार छन्। त्यस्तै, प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा पनि कांग्रेसका बागी उम्मेदवार खडा भएका छन्।